Ywar Thar Lay (YTU): 4/1/08
လေယာဉ်ကဆင်းဆင်းချင်း ကွာခြားမှုတွေကို သတိထား မိပါတယ်။ စတင် သတိထားမိတာကတော့ အေးမြမွှေးပျံ့တဲ့ သဘာဝမဟုတ်တဲ့လေ။ ပြီးတော့ လမ်းလျှောက်စရာ မလိုလောက်အောင် ရွေ.လျားနေတဲ့ စက်လှေကား။ များပြားတဲ့ လေယာဉ်အဝင်အထွက် စာရင်းကို မိနစ်ပိုင်းတိုင်း Update လုပ်ပေးနေတဲ့ LCD တွေရယ်ရွာကအမျိုးတွေကို ပြရရင် အံမခန်းပဲနော်ဆိုတဲ့ စကားမျိုး အခါတစ်ရာမက ကြားရမှာအသေအချာပဲ။
လာကြိုကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ. ပြန်လည်တွေ.ဆုံရတဲ့ နေ.လေးတစ်နေ.ပါ။ ပန်းစည်းနဲ.လာကြိုနေလို. အပျော်တွေစွက်ခဲ့ကြတဲ့ အချိန်ကာလလေးပေါ့။ သူငယ်ချင်းတို့ရေ ကျေးဇူးပါနော်။
Bus ကားစီးဖို့ တန်းစီကြရပါတယ်။ စနစ်တကျ ဆောက်လုပ်ပေးထားတဲ့ ခုံတန်းလေး တွေမှာပေါ့။ ကားမစီးခင်မှာ သူငယ်ချင်းက ကားစီးရမယ့် နည်းလမ်းတွေ ပြောပြပါတယ်။ ကျနော်တို.ဆီမှာလို ပိုက်ဆံပေးပြီး စီးရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။ အကြွေပေးစီးရင် စီး၊ ဒါမှမဟုတ် ကတ်ပြာလေး တခုကို Plastic board လေး ပေါ် တင်ပြီးစီး ရတယ်တဲ့ လေ။ ရွာကကြီးဒေါ်သာဆို ညည်းတို.ဟာကလည်းအေ မူမပါသာနဲ.နေမှာ (မူမပါသာဆိုတာ အညာလေသံပါ)။ ပိုက်ဆံတွေ အဲဒီကတ်ထဲမှာရှိသတဲ့လေ။ မယုံပါဘူး ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲနော်။ ဒါပေမယ့် Bus car ကို အဲဒီကတ်ပြားလေးနဲ. စီးခဲ့ရတယ်။ ကြောက်ကြောက်နဲ. ဖြစ်ပမလားပေါ့ အလဲ့ သူဟာသူတော့ ဖြစ်သွားသားပဲ။ တီလို.တစ်ချက်မြည်ပြီး ရသွားတယ်လေ။
ကားပေါ်ကဆင်းတော့ရောက်သေးဘူးတဲ့လေ။ Taxi စီးဖို့ လက်ပြလို်ုက်ရုံပဲ။ Taxi ပေါ်ရောက်တော့ ခါးပတ်ကြိုးတတ်ရမယ်တဲ့လေ။ စည်းကမ်းကလည်းအများသား။ Bangkok ခရီစဉ်တုန်းက အဖြစ်အပျက်လေး ကိုမြင်ယောင်ပြီး ပြုံးစစ ဖြစ်နေမိပါတယ်။ Bangkok က taxi မောင်းတဲ့ အမျိုးသမီး က ခါးပတ်ပတ်ပါ လို.ပြောတာကို ပိုက်ဆံပိုတောင်းတယ် ထင်နေမိတာ (Baht လို.ပဲကြားတာကို နော် အူတာ နတာ English ညံ့ဖျင်းတာ မပေါ်အောင် ဆင်ခြေပေးတာ) ။ ကားပေါ်မှာလမ်းကြောင်းတွေ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြနေတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုငေးကြည့်ရင်း လိုက်လာမိတယ်။ ကိုယ်ကမမှတ်နိုင်အောင်ဉာဏ်နည်းတယ်ဆို တာသူမေ့နေပြီထင်တယ်။ အင်းလေ ၃နှစ်တောင်ရှိခဲ့ပြီပဲ။ အခန်းက ၇ ထပ်မှာထင်တယ် တော်တော်လေး လျှောက်ရသေးတယ်။ အိမ်ကိုဖုံးဆက်အပြီးမှာတော့ အိပ်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်သေးတယ်။ အချိန်ကွာခြားချက်ပဲလား စိတ်လှုပ်ရှားလို.လား အများပြောကြတဲ့ အိပ်ရာပြောင်းတာကြောင့်လား အိပ်လို.ပျော်ခဲ့ဘူးလေတော်တော်နဲ့။
နောက်တနေ့မှာတော့ သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ မွေးနေ.ပွဲကို သူငယ်ချင်း အားလုံးနဲ့ဆုံဖို့ သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ သူတို့လိုက်ပို့တဲ့ နေရာလေးတွေပေါ့။ အိမ်ပြန်အရောက်မှာတော့ လုပ်ငန်းစဖို့ ပြင်ရပါတော့တယ်။ အဲဒါကတော့ အလုပ်လျှောက်ဖို့ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်(ကိုကြီးငဲ သီချင်းမဟုတ်ပါ) ပြင်ဆင်ရပါတယ် First Impression ဆိုတော့လည်း တတ်စွမ်းသလောက်ပေါ့ ဒါမှInterview ခေါ်မှာဆိုတော့လည်း လုပ်ထားမှ။ စလျှောက်တုန်းက Interview တွေမရဘူးဗျ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စစ်ခိုင်းကြည့်တေ့ာမှ Yahoo email ရဲ. Problem ဆိုတာတွေ့ ရတော့တယ်။ ကျနော်. Attachment တွေကို ဖွင့်လို့ မရမှန်းသိလိုက်ရချိန်က တပတ်အကြာမှာပါ။
နောက်တပတ်မှာတော့ Interview နှစ်ခုကို တရက်ထဲမှာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးခြေလှမ်း (မကြီးတင်ဇာမော် သီချင်းဟုတ်ဘူးလေ) ကို ယုံကြည်ချက်တွေ အပြည့်နဲ့ပေါ့။ တကယ်တော့ အဲဒီအလုပ်တွေမရခဲ့ပါဘူးလေ။ ၁၃ခုလောက်ဖြေအပြီး အလုပ်တခုတော့ ကံကောင်းထောက်မရရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းရဲ့ အားပေးစကားအရဆိုရင် ၁လထဲနဲ့ အလုပ်ရမယ်ထင်ခဲ့တာကိုးတဲ့ ဒီကိုအထင်သေးတာကိုးတဲ့။ ဟုတ်တယ်နော် ကျနော် လွယ်လွယ်ရမယ် ထင်ခဲ့သလားမသိ။ ၁လ ပြည့်ဖို. ၂ ရက်လောက်အလို မှာတော့ သူငယ်ချင်း က ICA မှာ ကိုယ်တိုင်လိုက် သက်တမ်းတိုးပေးလို့ နောက် ၁လ အောင်မြင်စွာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အသေအချာပဲ မသိလို.လား မှားယွင်းရွေးချယ်ခဲ့သလား company ၁ခုကကျနော့်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ Weighing machine company ပါ။ Title က တော့ Service engineer တဲ့။ လစာကတော့အနှိမ်ခံလစာနဲ့ပါ။ OT ပေးမယ် ခံစားခွင့်တွေ ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ ချက်ချင်းလက်မခံသေးပဲ ၂ပတ်လောက်စောင့်ခဲ့ပေမယ့် အဲဒီအလုပ်နဲ့ပဲ ကံစပ်တယ်ထင်တယ်။ Monday မှာ Spass application ကို online က နေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Thursday မနက်ခင်းမှာတော့ ph call တခုစောစီးစွာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့် Spass approved ဖြစ်သွားပြီတဲ့ ရုံးကို အခုချက်ချင်းလာခဲ့ပါတဲ့လေ။ ရေကမန်းကတမ်းချိုးပြီး MRT ကိုပြေးရတယ်။ MRTမှာ Card ပြားလေးထဲကို ပိုက်ဆံ ထည့်ဖို့ကြိုစားမိတယ်။ ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ ၅ ဒေါ်လာကိုထည့်ကြည့်တယ်။ ပြန်ထွက်လာတယ်လေ။ ပိုက်ဆံကို ဟိုဖြန့်ဒီဖြန့်လုပ်ပြီး ပြန်ထည့် ကြည့်တယ်။ ရဘူးဗျ ပြန်ထွက်လာတယ်။ တောသားတော့ အခက်တွေ့နေပြီ။ စိတ်လျှော့ပြီး customer service မှာပဲ ထည့်ခိုင်းရတော့တယ်။ နောက်မှသိရတာက ၁၀ဒေါ်လာ အနည်းဆုံး ထည့်ရမယ်တဲ့လေ။ ဟဲ ဟဲ အဲလောက်ကိုနုံတာပါဆို။
Company ကိုရောက်တော့ ဆေးစစ်ဖို့စာရွက်တွေ ထုတ်ပေးပြီး မြန်မြန်ထက်ထက် စစ်ခိုင်းပါတော့တယ်။ တကယ်တမ်းသူတို့ လျှောက်ပေးခဲ့တဲ့ Post က Assistant Engineer Post ပါ။ တည်မိတဲ့ ဘုရား ဘာပဲနားနားပေါ့ဗျာ။ တကယ်တော့ အလုပ်စဖို့ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘူးလေ။ အလုပ်နဲ့နီးတဲ့ အိမ်ရှာရအုံးမယ်လေ ပြီးရင်အိမ်ပြောင်းရမှာပေါ့။ စာရွက်စာတမ်းတွေ စပေးကတည်းက Admin က ပြောပါတယ် Passport သက်တမ်းတိုးရမယ်ထင်တယ်တဲ့။ ကျနော်ငြင်းခဲ့တယ် အို မဖြစ်နိုင်ဘူး သက်တမ်းတိုးရင် ပိုက်ဆံပေးရမှာလေ။ အလုပ်မစရသေးဘူး ပိုက်ဆံပေးရမယ်ဆိုတော့ မပေးချင်ဘူးပေါ့ဗျာ ရှိမှ မရှိတာကိုး။ MOM Officer ကလည်း တကယ်ပဲ သက်တမ်းတိုးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ မရှိမဲ့ရှိမဲ့ Passport သက်တမ်းတိုးဖို့ ၃၀၀ ရယ် အခွန် ၆လစာရယ်နဲ့ ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်းစာရင်း ဝင်သွားပါတော့တယ်။ စိုင်းစိုင်းရေ စကားလေး ခဏသုံး ပရစေနော်။ အားလုံးပြီးလို့ Office ကို ဖုန်းခေါ်တော့ မနက်ဖြန်အလုပ်လာဆင်းရမယ်တဲ့။ မဆင်းချင်ဆင်းချင်နဲ့ သွားဆင်းရပါတယ်။ စဆင်းကာစ ၂ ရက်ကတော့ ထိုင်ခိုင်းထားတာပေါ့နော်။ ရုံးကအစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖားပုံပြင်ထဲကလိုပေါ့ (Philipine မဟုတ်ပါ) သူပုံပြင်လေး က ဖားတွေကို ရေထည့်ထားတဲ့ အိုးလေးထဲ ထည့်ထားပေးတယ်တဲ့ ဖားတွေကလဲ ပျော်ရွှင်နေတာပေါ့နော် ပြီးမှမီးဖိုပေါ်တင်ပြီး မီးအေးအေးလေး နဲ့ နွေးတေးတေးလေး ဖြစ်လာတော့ ရေပူရေအေးရတဲ့ Five star hotel ဆိုပြီးပျော်နေမှာပေါ့ တော်တော်လေး မီးအရှိန်တက်လာတော့ ဖားတွေပြန်ထွက်လို့ မရတော့ဘူးတဲ့လေ။ အဲလို််မျိုး
ရွာသားလေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ဖားဘဝလေးကို ဆက်ရေးပါအုံးမယ်နော်။
photo is copy from goggle search!
Posted by ရြာသားေလး at 11:37 PM3comments Links to this post
ေယာက္်ား/မိန္းမ (sharing from my fri)
၁) ေအာင္ျမင္ေသာ ေယာက်္ား ဆိုသည္မွာ ကိုယ့္မိန္းမ သံုးသည္ထက္ ပို၍ရွာႏိုင္ေသာသူ ျဖစ္သည္။ေအာင္ျမင္ေသာ မိန္းမ ဆိုသည္မွာ ထိုသို႕ေသာ ေယာက်ာ္းမ်ိဳးကို ရွာႏိုင္ေသာသူ ျဖစ္၏။
၂) ေယာက္်ားမ်ားသည္ အိပ္ယာထလာလွ်င္ အိပ္ယာ၀င္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကဲ့သို႕ပင္ ၾကည့္ေကာင္းေနျမဲ ျဖစ္သည္။မိန္းမမ်ားကား ညအခ်ိန္တြင္ တနည္းတဖံု ယိုယြင္းသြားတတ္ေလသည္။
၃) ေယာက္်ားတစ္ေယာက္သည္ ၁ က်ပ္တန္ ပစၥည္း ကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္လွ်င္ ၂ က်ပ္ဆိုလွ်င္လည္း ေပး၀ယ္သည္။မိန္းမ တစ္ေယာက္သည္ ၂ က်ပ္တန္ပစၥည္းကို မႏွစ္သက္လွ်င္ ၁ က်ပ္ေပး၀ယ္သည္။
၄) မိန္းမသည္ ေယာက္်ားကို သူ ေျပာင္းလဲလိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ျပီး လက္ထပ္သည္။ သို႕ရာတြင္ သူူ မေျပာင္းလဲေပ။ေယာက်္ားသည္ မိန္းမကို သူမ မေျပာင္းလဲဟု ေမွ်ာ္လင့္ျပီး လက္ထပ္သည္။ သို႕ရာတြင္ သူမ ေျပာင္းလဲ သြားသည္။
၅) ဘ၀တြင္ ေယာက်ာ္း က မိန္းမကို နားမလည္ႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ ၂ ခုရွိသည္။ လက္မထပ္မီွအခ်ိန္ႏွင့္ လက္ထပ္ျပီးအခ်ိန္။
၆) မိန္းမ တစ္ေယာက္သည္ လက္မထပ္မီ အခ်ိန္အထိ သူမ၏ အနာဂတ္ကို စိုးရိမ္ပူပန္သည္။ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္သည္ မိန္းမမယူခင္ အခ်ိန္ထိ သူ၏ အနာဂတ္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ စရာမလိုေပ။
၇) ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနလိုလွ်င္ သူ႕အား မ်ားမ်ားနားလည္ေပးျပီး နည္းနည္းခ်စ္ပါ။မိန္းမတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနလိုလွ်င္ သူမအား မ်ားမ်ား ခ်စ္ျပီး လံုး၀ နားလည္ေပးရန္ မၾကိဳးစားပါႏွင့္။
၈) လက္ထပ္ျပီးေသာ ေယာက်္ားတိုင္းသည္ မိမိတို႕၏ အျပစ္မ်ားကို ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္သင့္သည္။ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုတည္းကို လူႏွစ္ေယာက္ က မွတ္မိေနျခင္းသည္ အက်ိဳးမရွိေပ။
၉) မိန္းမမ်ားသည္ စကားမ်ား အျငင္းပြါးျခင္းတစ္ခု၏ ေနာက္ဆံုးစကားကို ေျပာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုစကားေနာက္ ထပ္ေျပာေသာ ေယာက်ာ္းတို႕၏ စကားမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ အျငင္းပြါးမွဳ တစ္ခု၏ အစျဖစ္သည္။
၁၀) မိန္းမမ်ားသည္ လက္ထပ္ျခင္းကို ခ်စ္ဇာတ္လမ္း၏ အစဟု ယူဆၾကေသာ္လည္း ေယာက်ာ္းမ်ားကား လက္ထပ္ျခင္းကို ခ်စ္ဇာတ္လမ္း၏ အဆံုးဟု ယူဆၾကကုန္၏။
Posted by ရြာသားေလး at 12:01 AM 1 comments Links to this post
report card (sharing from my fri)
အေမ..သူ႕သမီးအခန္းကို ျဖတ္သြားစဥ္.. အိပ္ရာခင္းကို.. သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေခါက္ထားျပီး.. အားလံုးသန္႕သန္႕ရွင္းရွင္း ျဖစ္ေနတာျမင္ေတာ့ အံၾသသြားသည္... အိပ္ရာေဘးက.. မွန္တင္ခံုေပၚမွာ.. စာအိတ္တခု ေထာင္ထားတာ ေတြ႕သြားသည္။ ..အေမသို႕.. လို႕ေရးထားသည္..။ သူမ..တုန္လႈပ္စြာျဖင့္.. စာအိတ္ကိုေဖာက္ျပီး.. စာကိုဖြင့္ဖတ္လိုက္သည္...။ အေမ သမီး..ဒီစာကိုေရးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ.. အရမ္းလည္း ေနာင္တရတယ္..၀မ္းလည္းနည္းတယ္..။...သမီး..သမီးရည္းစားနဲ႕.. ခုိးရာလိုက္သြားျပီ.. အေမ...သမီးေတာ့.. တကယ့္ကိုသမီးခ်စ္တဲ့လူကိုေတြ႕ျပီ... သူက..သူရဲ႕နားကြင္း.. ေဆးမင္ေၾကာင္..နဲ႕ သူ၀တ္တဲ့..အ၀တ္အစားနဲ႕.. တကယ္ကိုပဲ ၾကည့္လို႕ေကာင္းတယ္..။ ...ဒါေပမဲ့.. သမီး.. သူ႕ေနာက္လိုက္သြားတာ.. ဒါတခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး..အေမ..သမီးမွာ.. ကုိယ္၀န္ရိွေနျပီ..။..သူကေျပာတယ္. သမီးတို႕ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရြင္ရြင္ ေနၾကရမွာတဲ့..။ ..ေတာထဲမွာ.. သူပိုင္တဲ့..တဲေလး ရိွတယ္တဲ့..။ သူက..သမီးနဲ႕အတူ.. ကေလးေတြ အမ်ားၾကီး လိုခ်င္တယ္တဲ့....။ .သူကသမီးတို႕.. ေဆးေျခာက္ေတြ.. ကိုကင္းေတြကိုစိုက္ျပီး.. အသက္ေမြးၾကမယ္တဲ့ေလ..။ ...အဲဒီ့အခ်ိန္အတြင္းမွာ.. သမီးတို႕.. ေအအိုင္ဒီအက္စ္ကို.. ကုလို႕ရမယ့္.. ေဆးေပၚလာပါေစလို႕.. ဆုေတာင္းမယ္.. ဒါမွ..သမီးရည္းစား ျမန္ျမန္သက္သာမွာ..။ သမီးတို႕အတြက္.. စိတ္မပူပါနဲ႕အေမ..။ ..သမီးက.. အခုဆို.. ၁၅ႏွစ္ေတာင္ေရာက္ေနျပီ.. ကိုယ္ကုိယ့္ကို ဘယ္လိုဂရုစိုက္ရမယ္ဆိုတာ.. သမီးသိပါတယ္..။ တေန႕ေန႕ၾကရင္.. အေမတို႕ဆီ.. သမီးတို႕ျပန္လာျပီး.. အေမ့ေျမးေလးေတြကို.. လာျပမွာပါ.. အေမ့ရဲ႕..သမီး.. ဂ်ဴလိုင္..
PS: အေမ.. အေပၚမွာေရးထားတာေတြ.. တခုမွ..မဟုတ္ဘူးသိလား..။ ..သမီးအခု.. သမီးသူငယ္ခ်င္းအိမ္မွာ..။ ...ဘ၀မွာ..သမီးမွန္တင္ခံုေပၚက. အံဆြဲထဲက.report cardထက္.. ပိုျပီးဆိုးရြားတဲ့.. အရာေတြရိွတယ္ဆိုတာ.. သိေစခ်င္လို႕ပါ..။ ..သမီးအိမ္ျပန္လို႕.. စိတ္ခ်ရျပီးဆိုရင္.. သမီးဆီဖုန္းဆက္လိုက္ေနာ္......။
Posted by ရြာသားေလး at 11:57 PM 1 comments Links to this post
အခုတစ္ေလာ အရင္တုန္းကမက္ခဲ့ဖူးတဲ့ အိပ္မက္ဆိုးတစ္ခုကို ျပန္လည္သတိရေနပါတယ္။ ျပန္မက္ခ်င္လို.လား ေမးရင္ လံုး၀ျပန္မမက္ခ်င္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဘယ္သူက အိပ္မက္ဆိုးကို ျပန္မက္ခ်င္ပမလဲေနာ္။ ဒါေပမယ့္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရိွတဲ့ အရာထဲမွာ အဲဒီအိပ္မက္ဆိုတာပါေနတာလဲ အမွန္ပဲေလ။
ႏွစ္နဲ.ခ်ီျပီး ၾကာၾကာမက္ခဲ့တာဆိုေတာ့ လြယ္လြယ္ ဘယ္ေမ့ႏိုင္မွာလဲ။ ညတိုင္းမက္ခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အိပ္မက္ဆိုတာ မက္ခ်င္တိုင္း မက္လို.မရသလို မမက္ျဖစ္ေအာင္ တားဆီးလို႔လည္း မရဘူးေလ။
စမက္ခါစကေတာ့ ေပ်ာ္စရာေကာင္းမယ္ စိတ္လွုပ္ရွားစရာေကာင္းမယ္ ထင္ခဲ့တာ။ အသစ္အဆန္းရတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္လိုေပါ့။ ေနာက္ကြယ္က အတုအေယာင္ေတြ မာယာေတြကို မွမျမင္ႏိုင္ခဲ့တာ။ အိပ္မက္ရဲ့ စြဲေဆာင္မွု ေနာက္ကို ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုက္ခဲ့မိေတာ့တာေပါ့။
ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ လေပါင္းမ်ားစြာကို ဖန္ဆင္းေပးခဲ့တာေတာ့ ေက်းဇူးပါ။ ေနာက္မွာေတာ့ အေမွာင္အတိျပီးတဲ့ ကာလေတြပါပဲ။ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ထိတ္လန္႔စရာ ေကာင္းေသာ အိပ္မက္ဆိုးမ်ားနဲ႔ ၾကံဳရခ်ိန္မွာေတာ့ ျပန္လည္ႏွုိးထဖို႔ ခဲယဥ္းေနခဲ့ပါျပီ။
ေလာကရဲ့နိယာမအတိုင္း အေကာင္းအဆိုး ဆိုတာ ဒြန္တြဲျမဲ။ ေကာင္းကြက္ေတြပဲ ေရြးလို႔မရရံုသာမက ဆိုးကြက္ေတြကိုလည္း ဖယ္ထုတ္လို႔ မရစေကာင္း။ အဲဒီေတာ့ ဆိုးမွန္းသိတဲ့ အိပ္မက္ေတြကို မက္လ်က္ ထိတ္လန္႔တုန္လွုပ္လ်က္ နဲ႔ တညမက္လိုက္ တညအိပ္ေပ်ာ္လိုက္ ေနခဲ့ရတယ္။
အိပ္မက္က ႏိုးထလာခ်ိန္မွာေတာ့ မမက္ခ်င္ဘူး ေနာက္မမက္ေတာ့ဘူး လို.ဆုေတာင္းမိပါတယ္။ နာက်င္ေၾကကြဲစိတ္ ရင္မွာအျပည့္နဲ႔ အိပ္မက္နဲ႔ေ၀းရာကို ထြက္ေျပးဖို႔ ၾကိဳးစားမိျပန္တယ္။ ရစ္ပတ္ေႏွာင္တြယ္တဲ့ အဲဒီအိပ္မက္က ရုန္းထြက္ဖို႔ မေပးခဲ့ျပန္ဘူး။ သံသရာဆိုတာ အိ္ပ္မက္မွာလဲ ရွိတတ္တာပါလား။
ေနာင္တအျပည့္နဲ႔ ႏိုးထရတဲ့ မနက္ေတြ လက္ေရခ်ိဳးလို႔ မရႏုိင္ေတာ့တဲ့ ကာလတစ္ခုမွာေတာ့ အိပ္မက္ဆိုးက လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့ပါတယ္။ ရတဲ့အခြင့္အေရးကို လက္လြတ္မခံဘဲ ဇြတ္တင္းျပီး ၾကိဳးစားလိုက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ ဇြဲရွိသူရဲ႕ေအာင္ပြဲ ကို ရရွိခဲ့ပါေတာ့တယ္။
ျပန္မမက္ခ်င္ေတာ့တဲ့ အိပ္မက္ဆိုးကို မေမ့ႏိုင္ေသးတာမို႔ ျပန္မမက္ျဖစ္ေအာင္ပဲ ဆုေတာင္းေနရပါတယ္။ အိပ္မက္ဆိုတာ တားျမစ္ခြင့္မရိွတာမို. ဆုေတာင္းရင္းနဲ႔သာ……
Posted by ရြာသားေလး at 12:50 AM4comments Links to this post
အိပ်မက်ခရီးလို့ ပဲထားပေးပါ။ တကယ်ကို ဒီခရီုးဖြစ်လာဖို့ ၈၅% မဖြစ်နိုင်လို.ပါ။ ရန်ကုန်ကို စလာကတည်းက ဒီခရီုးမျိုး မသွားပါဘူးလို့ နှုတ်ကတိပေးခဲ့ရလိုပါ။ ဒါကြောင့် အိပ်မက်ခရီးလို့ ပဲထားပေးပါ။
ကားအနီကြီးနဲ့ ၂ နှစ်တာ ခရီးအပြီးမှာ အိပ်မက်ခရီးစဉ်အစပြု ဖြစ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီက သူငယ်ချင်းမောင်နှမရဲ့ အကူအညီနဲ့ပါ။ July 28 ခရီးစဉ်စဖို့ပါ။ ခရီးစဉ်သွားဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပြင်ဆင်စရာတွေကို တစ်ယောက်တည်း ယောက်ယပ်ခပ်အောင် တက်သုတ်ရိုက် စီစဉ်ရပါတော့တယ်။ ဒီခရီုးစဖို့အားပေးတဲ့ မေမေလည်း လာရောက်ကူညီခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြဲကံမကောင်းတဲ့ ကျွန်တော်က သွားဖို့တစ်ပတ်အလိုမှာ အပြင်းအထန် ဖျားပါတော့တယ်။ ဆေးခန်းသွားလိုက် မသက်သာလိုက်နဲ့ပေါ့။ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ စီစဉ်ပြီးသားခရီးစဉ်ပျက်ခဲ့ရင် ဘာလုပ်ရပ ဆိုပြီး စဉ်းစားရကြပ်နေခဲ့ရတယ်။ Plan B ဆိုတာလဲမရှိခဲ့တော့ ဘုရင့်နောင် ဖောင်ဖျက််ကိန်းပဲ။ သေချာတယ်။
သွားခါနီး ၂ရက်အလိုမှာတော့ သားအမိနှစ်ယောက် မနက်စာစားရင်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်ကြရသေးတယ်။ နီးရင်မတည့်ကြပေမယ့် ဝေးမယ်ဆိုတယ်တော့လည်း ဒီလိုဖြစ်ကြရ သေးတယ်နော်။ အဖေရောက်လာတော့ နှစ်ယောက်ပေါင်း သိမ်းဆည်းကြပါတော့တယ်။ ပွစိပွစိနဲ့ အမေကတော့ ကြိုတင် မသိမ်းဆည်းရ ကောင်းလားပေါ့။ နေမကောင်းသေးတဲ့ ကိုယ့်ကတော့ ခေါင်းထောင်ကြည့်ရုံကလွဲပြီး ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။
မနက်ဖြန်လို သွားရတော့မယ့် ဒီနေ့လိုညနေခင်းအချိန် Check list နဲ. အားလုံးကို တိုက်စစ်ကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ ဖျားနေတဲ့လူ တခါတည်း အဖျားပျောက်ချင်စိတ် ပေါက်သလောက်ပါပဲ ခေါင်းနပန်းလည်း ကြီးလာပါတော့တယ်။ Air Ticket နဲ့ Passport ကပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီ။ ပြောင်လက််ရှင်းသန့်နေတဲ့ တအိမ်လုံးမှာ မျှော်လင့်ချက်မှ မရှိုနိုင်တော့တာ။ သေချာတာကတော့ ခရီးစဉ်ဖျက်မလား ရက်ရွှေ့ရမလား။ ဟင်းတွေချက်နေတဲ့မေမေ လူကြုံလာပေးတဲ့လူတွေကို ဘယ်လိုပြောရပ။
အစ်ကို ဆီကိုဖုံးဆက်ပြီး ညတွင်းချင်းကားနဲ့ လိုက်ဖို.ပြင်ကြတယ်။ တနေ့ကအိမ်ကို ပို့လိုက်တဲ့ကားနဲ့ အဲဒီဟာတွေ ပါသွားတယ်တဲ့။ ကားဂိတ်ကို ဖုံးဆက်ပြီး ရှာခိုင်းတဲ့ အခါမှာတော့ ကံကောင်းစွာပဲ မေမေပြောတဲ့ ပုံးထဲမှာပဲ ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ရှာအတွေ့ကောင်းပေမယ့် တွေ့တဲ့အချိန်က ညနေ ၆နာရီဆိုတော့ မကွေး ရန်ကုန် ကားတွေ တောင်တွင်းလောက် ရောက်ရော့မယ်။ လာပေးနိုင်မယ့် လက်ရွေးစင်နှစ်ယောက်ကို ရွေးထုတ်ပြီး ဖုံးဆက်ရပါတယ်။ ကားငှားလာဖို့ မှာလိုက်ပေမယ့် မှီမှမှီပမလားဆိုပြီး ဒွိဟဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ စေတနာ အကျိုးပေးတယ်ပဲ ပြောရမလား သူငယ်ချင်းတွေကို ဒံပေါက်စားစေချင်တာကြောင့် ညနေ Flight နဲ. စီစဉ်ထားတာ အတော်ပဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ကျေးဇူးရှင် နှစ်ယောက် ရောက်လာချိန်က ၁၀နာရီထိုးနေခဲ့တာမို့ မနက် Flight ဆို သေချာပေါက် ကျန်ခဲ့မှာပါပဲ။ အားလုံးပဲ သက်ပြင်းကိုယ်စီ ချနိုင်ကြပါတော့တယ်။
ဆွေမျိုးတသိုက်နဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး လေဆိပ်သစ်ကြီးမှာပေါ့။ အခုမှပြုံးဖော်ရကြပြီး တဖြတ်ဖြတ် ဓာတ်ပုံ ရိုက်နေတာကတော့ ထုံးစံအတိုင်း မေမေပဲပေါ့ ။ ခဏကြာလို့ Check in အဝင်မှာတော့ စိတ်ပူသလောက် ရှိသမျှ စုံစေ့အောင် ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ မေမေရယ် အားလုံးကိုအားနာပြီး ပေးသမျှလူကြံု သယ်လာတဲ့ ကျွန်တော်ရယ် အခက်ကြံု ရပါတော့တယ်။ သယ်နိုင်တဲ့ဝန်ထက် ပိုနေတာက ၁၀ ကီလိုတဲ့လေ။ ဘယ့်နှာလဲပေါ့။ အထုတ်တွေကို လည်းပြန်မထုတ်ချင်နဲ. စဉ်းစားရကြပ်နေတုန်း ဗြံုးဆို နောက်ထပ်ကျေးဇူးရှင်တယောက် ရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့ဆရာမရဲ့သား ငယ်ငယ်တုန်းက စာပြပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကလေးက လေဆိပ်မှတာဝန်ကျ ဝတ်စုံပြည့်နဲ့လေ။ ဘာပြောကောင်းမလဲ ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းထဲ ကျသလိုပါပဲ။ အဆင်ပြေတယ်ဆိုပါတော့။
စမိတဲ့အိပ်မက် တခုကို အဆုံးထိ မက်ရအုံးမယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာကိုယ့်အိပ်မက်ရဲ့ အဆုံးသတ် မဟုတ်ခဲ့တာမို. ဆက်မက်ရအုံးမယ်။ ဆက်မက်ရအုံးမယ်………..
Posted by ရြာသားေလး at 10:42 PM4comments Links to this post